ne Windows 11, Microsoft yakaunza yakagadziridzwa barbar uye Start menyu. Windows 11 inoratidzira mapikicha echirongwa, kusanganisira bhatani rekutanga, pakati pebhari rebasa pane kuruboshwe. Pamusoro pezvo, tsvaga, Widgets, task view, uye maChat icon anowoneka nekukasira pane taskbar, asi anogona kudzimwa.
Windows 11 haipe marongero ekushandura saizi yekumisikidza yemifananidzo pabhara rebasa. Ehe, iwe unogona kushandura kuyera pasi peiyo Settings app, asi kuita izvi kunochinja saizi yemifananidzo yese (kwete zvidhori pabhara rebasa), zvinyorwa (kwese kwese), nezvimwe zvinhu izvo vanhu vazhinji vasingade kuchinja.
Neraki, pane yekushandurudza kuti uchinje saizi yemabara ebhatani mairi mukati Windows 11. Zviri nyore zvakare. Zvese zvaunoda kuti uvhure iyo Registry uye chinja kukosha.
Chinja saizi yemapurogiramu echirongwa pa Windows 11 taskbar
Pedzisa madhairekisheni akapihwa pazasi kuti uchinje saizi yemabarbar icons mukati Windows 11.
ZVINOKOSHA: Kuchinja saizi yemabhara ebhatani inochinjawo saizi yebara rebasa zvinoenderana. Ndokunge, kana iwe ukawedzera saizi yemifananidzo, saizi yebasa rebhaji ichawedzerwawo otomatiki kuti igare nemifananidzo mikuru uye zvinopesana. Saka, hongu, gwaro iri rinogona zvakare kushandiswa ita bharaki rebasa diki kana hombe.
Nhanho 1: Shandisa iyo Kutanga / taskbar yekutsvaga kuvhura iyo Registry Edhita.
Kana iwe ukawana iyo Yevashandisi Akaunti Kodhi yekukurumidza, tinya Yes bhatani kuvhura iyo Registry Edhita.
Nhanho 2: Mune kero bar yeRegistry Edhita, kopi uye unamate iyo inotevera nzira uye rova ​​iyo Enter kiyi.
Nhanho 3: Zvino, kurudyi, iwe unofanirwa kugadzira kukosha kutsva. Kuti uite izvozvo, tora-kurudyi pane isina chinhu (kurudyi), tinya Nyowani, uye wobva wadzvanya DWORD (32-bit) Kukosha.
Zita zita idzva seTaskbarSi.
Nhanho 4: Pakupedzisira, tinya kaviri paTaskbarSi kukosha, seta 0 zvidiki, 1 yepakati, uye 2 yemifananidzo mikuru.
Dzvanya bhatani OK kuita.
Nhanho 5: Unofanira kutangazve PC yako kana kutangazve iyo File Explorer kuti uone shanduko.
Shandisa kuratidzira kuyera kuti uchinje saizi yezvidhori zvese nezvimwe zvinhu mu Windows 11
Chiyero chekuratidzira chinokutendera iwe kuti uwedzere kana kudzikisa saizi yemifananidzo, mamenu, zvinyorwa, uye zvimwe zvinhu. Heano maitiro ekuzviita izvozvo.
Nhanho 1: Dzvanya-kurudyi pane isina chinhu pane desktop uye tinya Ratidza marongero ekuvhura Zvirongwa> Sisitimu> Ratidza peji.
Nhanho 2: Pano, kurudyi, muchikamu cheScale & dhizaini, sarudza chiyero kubva kubhokisi rekudonha-pasi kuti ushandise zvakafanana. Iyo default chiyero kukosha i100%. Tinokurudzira kuti usarudze chiyero chinokurudzirwa na Windows 11.